Ngaba ungandibonisa ukuba iGoogle rankings ihambelana njani neenkcukacha zam ngasemva?
Kule minyaka elishumi nje edlulileyo, isabelo seengonyama zabanikazi beewebhu kunye nee-webmasters ziye zazala izihlwele ezinkulu ze-spammy ne-backlinks ezikhohlisayo-zonke ngenxa yezikhundla eziphezulu kwi-Google SERPs. Ngenxa yoko, malunga neminyaka emihlanu edlulileyo injini enkulu yokukhangela inikezela ukuhlaziywa kwe-Penguin ye-algorithm yokuqalisa-ukuqala ipenalizing kunye nokucwangcisa i-PBNs ezininzi (amanqabana eblogi yangasese), iifama ezenziwe ngokuzenzekelayo, iifowuni (ukutshintshana) kunye nokuphakamisa iiflegi ebomvu kunye nokubhengezwa kweendwendwe ngenjongo yokwakha iinjongo. Yingakho nokuba ukuphambukiswa okufutshane kwii-Guidelines eziphambili zeGoogle kwi-backlinks engabalulekanga, i-spammy okanye i-backlinks ingokuphosa iwebhusayithi yakho okanye iblogi kwisimo sohlwayo.
I-Google ixelela iingcebiso ezilungileyo kubangendawo
Into yokuqala ebonisa ukulungelelaniswa okuqinileyo phakathi kwedatha yakho ye-backlink kunye nesimo esikuko kwiGoogle kukuba Ihlabathi lanamhlanje lewebhu liphazamiseka ngokoqobo. Amaninzi ayenziwa ngamarobhothi e-intanethi. Ezinye zidalwe ukuthengiswa kwezinto ezininzi okanye ezijoliswe kumashishini atshintshiselwano ngabanye. Ngelo xesha, ezinye iinqonkco zinokulungiswa ngokukhawuleza ukuba zijonge njengendalo, ezinye zazo zizo zixhumanisi zokuhlela zesikolo. Ngoko, umngeni omkhulu kuGoogle ukuhlola i-backlinks database yonkcukacha zonke okanye iblogi-ukuqonda ubani odlala umdlalo ofanelekileyo kwaye ngokwenene ufanele abekwe kwindawo ephezulu.
I-Backlinks Database kunye neZenzo zangempela
Enyanisweni, xa iinjongo ezinkulu zophando ezifana neGoogle ngokwayo zibona unxibelelwano olubonisa indlela eya kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi, kukho ezintathu kuphela ongakhetha kuzo kwi-backlink nganye unayo. Ndiyathetha ukuba inokuthi ibonakale ivumelekile kwaye iyakufanelekela ukuqwalaselwa kwi-algorithm ye-Google yophando. Ngexesha elifanayo, yonke into inokuhlala isalingana-kwaye ezinye izixhumanisi zingabonwa njengento engeyiyo yonke into engenakunceda-ngaphandle kwempembelelo kwi-SEO. Emva kwakho konke, iwebhusayithi yakho okanye ibhulogi inokuhlawulwa kwakhona, ngenxa yokuba inxalenye yezixhumanisi zakho kwisiseko sakho se-backlinks (okanye ikhonkco elilodwa kuphela) likhankanywa ukuba lilolu hlobo olusisiseko.
Iinkcukacha ezinobungozi Ngeendawo zokubala kunye ne-Backlinks Database
Ngoko, kukho ubudlelwane obuthile phakathi kwendawo ekhoyo kwi-SERP kunye ne-backlinks database. Kodwa ingaba nzima kangakanani? Nolu uluhlu lweengqungquthela zebhulethi ukubonisa ukuba iziphi izikhonkwane zangaphandle ezingakwenzayo ngezinga lakho kwizinga.
izikhundla eziphezulu kwi-SERP zihambelana nenani lemithombo yoluncedo malunga ne-30 ngokwemyinge;
ukulinganiswa kokulungelelanisa kunokubonakala kunomtsalane ngakumbi, kuba iinkalo ezincinci azimangalisi ngokunjalo -kuqwalasela ukuba iGoogle inokuthembela malunga nama-200 okubeka uphawu;
ngaphezulu kwe-99% yazo zonke iiwebhusayithi kunye neeblogi ezihlaziywa ngolu hlobo lwakutshanje lwangoku lubonakala ukuba luncinci lunye lwangaphandle lwangaphandle;
malunga ne-22% yamaphepha ngamnye afunyenwe kwisigaba esilungileyo ngaphandle kwe-backlink yangaphandle kuzo zonke;
unxibelelwano olungaphezulu lunokubambisana nesimo esiphakeme, kodwa ukubheja kwinani labo kunokuba umgangatho akuthethi ukuba iwebhusayithi yakho iya kuboniswa phezulu kwiphando Source .